नेपाल बन्दको दिन बालुवाटारमा ओली-प्रचण्डको हाइकमाण्ड बैठक, के-के भए निर्णय ? — sancharkendra.com
नेपाल बन्दको दिन बालुवाटारमा ओली-प्रचण्डको हाइकमाण्ड बैठक, के-के भए निर्णय ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बन्द आव्हान गरेकै दिन सत्तारुढ नेकपाको बालुवाटारमा हाइकमाण्ड बैठक बसेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित ५ जना सहभागी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिवन्ध लगाइएको विषयमा ओली-प्रचण्डका शीर्ष नेताहरुले नै प्रश्न उठाइरहेका बेला बिहीबार २ अध्यक्षसहित ५ शीर्षनेताको बैठक प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांगठनिक एकताबारे छलफल गर्न नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएको पूर्व माओवादी केन्द्र स्रोतले संचारकेन्द्रलाई बतायो ।
दुबै अध्यक्षले तत्कालीन एमाले र माओवादीबाट ३/३ जना बोलाउने भनिए पनि माओवादीबाट कुनै पनि नेतालाई नबोलाएरे एमाले पक्षले बैठक सकेको स्रोतले बतायो । । एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतम भने बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
बैठकमा ओलीले माओवादीपट्टीका नेतालाई बोलाउन आवश्यक नरहेको संकेत गरेपछि प्रचण्डले कसैलाई पनि नबोलाएको हुनसक्ने सत्तारुढ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने । ‘ओली कमरेडले अहिले पार्टीभित्र अलि एकलौटी ढंगले निर्णय गर्दै जानुभएको छ । पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि उहाँले जे भन्यो त्यही मानिरहेको अवस्था हो ।’ सति केन्द्रीय सदस्यले भने- ‘विप्लवजीहरु माथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा ओली कमरेडले हतारमा निर्णय गर्नुभयो ।’
विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा ‘अपराधीक सङ्गठन’ भनेर घोषणा गर्नु त्यति उचित नभएको उनले बताए । तर बिहीबारको वैठकपछि प्रचण्डले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध लगाउने ओलीको निर्णयलाई प्रचण्डले समेत समर्थन गरेको उनले बताए ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपा आक्रामक रुपमा जनतासँग घुलमिल भएको र सरकारप्रति जनतालाई बितृष्णा जाग्दै गएको अवस्थामा केही न केही नगरी नहुने अवस्था आएको प्रतिक्रिया प्रचण्डले दिएको स्रोतले बतायो । बिहिबार दिउँसो सार्वजनिक कार्यक्रममा आफुलाई मार्न विप्लवले मान्छे खटाएको सूचना पाएको भन्दै आपत्ति जनाए पनि प्रतिबन्धबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् ।
सँगै ‘जनयुद्ध’ लडेका साथीहरूले आफूलाई मार्ने सूची बनाएको आरोप लगाउँदै उनले ‘प्रचण्डलाई नै एक नम्बरमा मार्नुपर्छ’ भनेर टिम खटाएको दस्तावेज भेटिँदा दुःख लागेको बताएका थिए। बिहीबार वाइसीएलले काठमाडौंको कोटेश्वर, पेरिसडाँडामा गरेको सहिद तथा बेपत्ता परिवारको सम्मान कार्यक्रममा उनले ‘प्रचण्डलाई मारेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बच्छ त ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
आफूलाई मार्न टिम खटाउनेप्रति दया लागेको भन्दै उनले राम्रोसँग सोच्न आग्रह गरे । राज्य कानुनअनुसार अघि बढ्ने भन्दै उनले ‘जनयुद्ध’को योजनाकर्ता, नेतृत्वकर्ता र शान्ति–प्रक्रियाको पनि नेतृत्वकर्ता भएकाले अन्तिमसम्म लडिराख्ने बताए ।
‘विप्लवले प्रचण्डजस्तै बन्छु भनेर नक्कल गरेको’ भन्दै उनले देशमा राजतन्त्रपनि नभएको र २०५२ सालकोजस्तो परिस्थिति पनि नभएकाले विप्लवले केही गर्न नसक्ने बताए । आफूहरुकै कारण देशमा परिवर्तन भएको दाबी गर्दै दाहालले भने–‘यसकाविरुद्ध लाग्नु भनेको निरंकुशता ल्याउन सघाउनु हो ।’
सांगठानिक एकताबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको बताइए पनि सरकारले सिके राउतसँग गरेको सहमति र विप्लवमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको बारेमा असन्तुष्टि बढेपछि छलफल गर्न गोप्य छलफल डाकिएको बुझिएको छ । बैठकमा माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीमा छलफल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भने विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै सिके राउतसँग भएको सहमतिको पनि बचाउ गरेका छन् ।
पार्टीमा छलफल नै नगरी विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । माधवकुमार नेपाल स्वयंले यस्ता निर्णयहरु हुँदा पार्टीमा छलफल नभएकाले अपरिपक्ज भनिसकेका छन् । बालुवाटारमा पनि उनले सोही कुरा दोहोर्‍याएको बुझिएको छ ।
सांगठनिक एकताबारे गृहकार्य बनेको कार्यदल सचिवालयले भंग गरेपछि सुरु भएको विवाद अझै हल हुन सकेको छैन । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेलले हात उठाएपछि कार्यदल भंग भएको थियो । तर, ५ सदस्यले सुझावसहित दुई अध्यक्षले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छन्, जसको बोधार्थ स्थायी कमिटीलाई समेत दिइएको छ ।
यसैबीच सरकारले गत फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गरी सो निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो। यी हुन् निर्णयहरू